“Tababbarka kooxda Real Madrid waa shaqo aan aqoon wax nasiino ah” – Zidane – Gool FM
(Madrid) 14 Okt 2019. Tababaraha kooxda kubadda cagta Real Madrid ee Zinedine Zidane ayaa sheegay in tababarka Los Blancos ay tahay shaqo aan garaneynin wax nasiino ah.
Zinedine Zidane oo ka soo muuqday shir jaraa’id ayaa wuxuu ka hadlay dhowr arrimood ee quseeyay shaqada tababarka ee kooxda Real Madrid.
Macalinka reer France ayaa wuxuu ugu horeyn hadalkiisa ku bilaabay:
“Markaad u shaqeeneyso koox sida Real Madrid ah, isla markaana aad tababare ka tahay, ma lihid waqti aad ku nasato, gaar ahaan marka jadwalka kulamada uu yahay mid mashquul badan”.
“Sidaas darteed waxaa muhiim ah inaad sii wado la shaqeynta ciyaartooydaada, isla markaana aad la socoto horumarkooda iyo qaab ciyaareedkooda, oo aad sii waddo dadaalka si ay u soo bandhigaan heerka ugu fiican”.
“Ma jecli nasiino, caalamka kubadda cagta waa daal markasta, waa inaad si buuxda diiradda u saartaa shaqadaada maalin kasta, gaar ahaan marka aad tababare u tahay koox tartameysa ee leh awooda sida Real Madrid oo kale”.
Si kastaba ha noqotee, Real Madrid ayaa hogaanka u heysa horyaalka La Liga ee dalka Spain, waxayna labo dhibcood ka sarreysaa kooxda difaacaneysa ee Barcelona, iyadoo laga war qabo in kulanka El Clásico uu ka harsan yahay 12 maalmood oo kaliya.
Dhanka tartanka Champions League Real Madrid waxay leedahay 1 dhibac oo kaliya kulamadii ay xilli ciyaareedkan ka ciyaartay wareega Group-yada, kulan waa laga adkaaday kulana waxay galeen barbar dhac.
PSG oo xaqiijisay in Neymar Jr uu soo gaaray dhaawac bowdada ah & mudada uu garoomada ka maqnaan doono